Waxaa laga yaabaa inaad dareento madax xanuun marka maqalka shuruudaha soo afjarno sida ROM, Bootloader, soo kabashada iyo Nandroid iwm, iyo malayn inay yihiin kaliya geeks ah. Inkasta oo aanay u yihiin in ay aad u xun oo xitaa aan geeks sida igu iyaga fahmi karaan, iyo waxa ay kaa caawin karta in uu fahmo sida shuqullada rooting Android iyo sidoo kale fogaado dhibaatooyinka qaar ka mid ah marka aan sameeyo oo Sixira.
Helitaanka Root dhab ahaan ka yimaadaa Linux ah taas oo macnaheedu yahay helo ugu badan, iyo Android oo horumarsan ku salaysan Linux, si afjarno ka dhigan tahay in aad heli xididka ama helitaanka ugu sareeya si uu u xakameeyo qalab Android aad. Guud ahaan, waxaad heli kartaa helitaanka soo afjarno by rakibidda codsiga Superuser ama flash ROM taas oo hore ayaa heli kara xidid.
ROM waa nidaamka qalliinka ah ee Android sida Windows XP for Windows OS, waxaa ka mid ah wax badan oo ka mid ah sifooyinka iyo xitaa fiirin kala duwan. Oo halkan sababo fiican sababta ay tahay in aan ka rujin qalab noo Android .
Marka aan dhahno 'Stock Android', waxay ka dhigan tahay ROM asalka ka Google. Xaaladaha kale, 'Stock' kale oo macnaheedu noqon karaa qoraalkii Android ka soo saaraha telefoonka aad. Oo waxaa dhab ahaan ugu ROMS xisbiga saddexaad sida CyanogeonMod ku salaysan yihiin version saamiyada.
Radio waa qayb ka mid ah firmware ah taas oo loo isticmaalayo si loo xakameeyo xogta gacanta, Wi-Fi iyo GPS iwm, aad iftiimiyo karaa radio caado sida flash ROM caado, laakiin ka taxadarnaa in sida ay u keeni karo dhibaatooyin fara badan.
Shidista dhab ahaantii shariig inay ku rakibidda xaaladdan, sidaa darteed marka aynu ka nidhaahno "biligleynaya ah ROM" macnihiisu yahay "ka ku rakibidda nidaam" qalabka Android aad. Haddii aad raadinayso sida loo iftiimiyo ROM caado in qalab Android aad, fadlan hubi tutorial faahfaahsan this.
Waxaa jira had iyo jeer halis yar marka biligleynaya ROM ah, iyo haddii qalab aad si caadi ah u shaqayn karaa, in waxa la yiraahdo waxaan bricked. Xaaladaha intooda badan, dadku waxay yiraahdaan "leben" run ahaantii, macnaheedu ma aha in ay yihiin qalab bricked, taasi waa dhibaato aad u fixable.
Bootloader waa heerka ugu hooseeya ee software qalabka, badankooda waxaa loo xiraa taas oo macnaheedu ma aad iftiimiyo karaa kabsanaya caado ama ROMS. Sidaas hor haddii aad u baahan tahay inaad unclock bootloader jebiyaan qalabka aad. Fiiro gaar ah: furo bootloader macnaheedu maahan soo afjarno qalab aad, laakiin waxa aanu kuu ogolaanaysa inaad xididka ka dib markii sameeyey.
Kabashada waa software ah oo ay u qabtaan hawlo heerka nidaamka sida gurmad, iftiimiyo ROM iwm kabashada default ayaa loo isticmaalaa, waxaad u baahan tahay in lagu furo bootloader iyo iftiimiyo kabashada caado in ay helaan dheeraad ah.
By isticmaalaya kabsanaya dhinac saddexaad, oo aan awoodno gurmad phone oo dhan oo la yidhaahdo hayaan Nandroid. Waa dhab ahaantii image nidaamka telefoonka, waxaa noo ogolaadaa in ay iftiimiyo si ay xilligan aad ka hor inta aan iftiimiyo ROM haddii wax xun oo dhacaya.
Tani waa app ah oo kaliya loo isticmaali karaa in qalabka xidid iyo waa ka duwan yahay gurmad nandroid. Waxay kaa caawin karaan gurmad ah barnaamijyadooda iyo goobaha oo aad u faa'iido badan marka aad u kala bedesho ROMS ama telefoonada.
Haddii aad isticmaalayso telefoonka HTC ah, waxaa jira feature loo yaqaan Xaqiijinta Saxiixa ah ee bootloader (oo loo yaqaan HBoot ee telefoonka HTC), iyo default, telefoonka waa S-kaas oo aad ka hortagi doonaa biligleynaya images radio caadadii. Sidaas wareegaya S-OFF ha kartaa in aad iftiimiyo raadiyaha cusub. RUU, SBF iyo OPS
RUU, SBF iyo OPS
Waxay yihiin files ka soo saaraha in la beddelo software ku saabsan telefoonka. RUU u taagan tahay ROM Utility casriyayn ee telefoonada HTC, SBF waxay u taagan tahay System Boot Files ee telefoonada Motorola, files OPS & god yihiin ee telefoonada Samsung. Waxay yihiin files in sida saarayaasha samatabbixin Ota aad si.
Rajaynaynaa Qaamuuskaan kor ku xusan ka mid ah marka la eego rooting kaa caawin kartaa inaad si fiican u fahmaan rooting ah, iyo haddii aad qabtid wax su'aalo kale oo ku saabsan qaamuuska, dareema si xor ah u hoos ku qoran faallo.